अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटेपछि कसलाई के फाइदा? :: Setopati
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटेपछि कसलाई के फाइदा?
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,जेठ २५
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगमले एकपटकमै २० प्रतिशत मूल्य घटाएको छ।
निगमले अबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि ७० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर कारोबार गर्दै आएको इन्धनमा अबदेखि १५ प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा नराख्ने निर्णय आयल निगमले गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा धेरै नाफा राख्दा महंगो भएको र यसले गर्दा नेपालको उडान प्रतिस्पर्धी नभएको पर्यटन व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।
महंगो हवाई इन्धनको मारमा परेको भन्दै सरकारी स्वामित्वकै नेपाल एयरलाइन्सले नाफा घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल सुरूदेखि नै इन्धनको नाफा घटाएर सस्तो बनाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए।
पर्यटन व्यवसायी र स्वयम् राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको मागअनुसार आयल निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि यसको लाभ कसले धेरै पाउँछन्? इन्धनको मूल्य घटाएर यात्रुले कस्तो लाभ पाउँछन्? कि एयरलाइन्सलाई मात्र फाइदा हुने हो? प्रश्न उब्जिएका छन्।
नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल इन्धनको मूल्य प्रतिस्पर्धी भएपछि सबैभन्दा पहिला यात्रुले लाभ पाउने बताउँछन्।
'यात्रुले जति धेरै लाभ पाउँछन्। त्यति धेरै हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यही कारण म यहाँ आएको दिनदेखि नै निरन्तर यसमा पनि लागेको थिएँ,' उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा टिकटको मूल्य सिटको माग र उपलब्धताको आधारमा तय हुन्छ। जति धेरै सिट खाली त्यति धेरै सस्तो हुन्छ भने जति धेरै प्याक उति नै महंगो हुन्छ। तर पौडेल इन्धनको मूल्य घटेपछि यस्तैमा पनि यात्रुले नै लाभ लिने बताउँछन्।
'सामन्य कुरा छ यसमा। अहिले नै हामीले चार्टर्डको भाडा दुई हजार डलरसम्म सस्तो बनाएका छौं। भोलि नियमित यात्रुबाहक उडान हुनेबित्तिकै यात्रु भाडाको आधारदर पनि सस्तो हुन्छ,' उनले भने, 'अर्को कुरा प्रतिस्पधार्का कारणले सस्तो वा महंगो हुँदा पनि अहिलेको तुलनामा सस्तोमा अझ सस्तो पाउँछन् भने महंगोमा अहिलेको तुलनामा न्यून महँगो पाउँछन्।'
उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडामा ३० प्रतिशत इन्धनको हिस्सा हुन्छ। अर्थात् कुनै गन्तव्यको भाडा १० हजार छ भने त्यसमा ३ हजार इन्धनको हिस्सा हुन्छ।
अर्को फाइदा पर्यटन उद्योगले लिने उनको भनाइ छ। नेपालको हवाई इन्धन महंगो हुँदा खाडी मुलुकमै हुने उडान पनि दुरीको अनुपातमा भाडा महंगो हुने गरेको थियो। यो निर्णयबाट केही भएपनि भाडा प्रतिस्पर्धी हुने छ।
यो निर्णबाट फाइदा पाउने अर्को पक्ष एयरलाइन्स कम्पनी हुन्। त्यसमा पनि नेपाली एयरलाइन्सलाई हुनेछ।नेपाली एयरलाइन्सले धेरैजसो इन्धन नेपालमै भर्छन्। विदेशीले भने आवश्यक मात्र यहाँ भर्छन् बाँकी सस्तो पाइने गन्तव्यमा भर्छन्। इन्धन सस्तो भएपछि नेपाली एयरलाइन्सले विदेशीसँग अझै भाडामा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने पौडेलको भनाइ छ।
तेस्रो फाइदा आयल निगमलाई नै हुने छ। यसअघि अधिकांस एयरलाइन्सले विदेशमै धेरै इन्धन भर्थे। टर्किस एयरलाइन्स बाहेका अरुले यहाँ पूर्ण इन्धन भर्थेनन्। मूल्य सस्तो भएपछि विदेशीले यहाँ धेरै इन्धन भर्न सक्छन्। जसबाट आयल निगमको व्यापार बढ्ने छ।
इन्धनको मूल्य घटेपछि कार्गो उडानको भाडा सस्तो हुन्छ। यसको अर्थ हवाई मार्गबाट नेपाल आउने वस्तुको मूल्य पनि सस्तो हुन सक्छ। नेपाल एयरलाइन्सले हालैमात्र कार्गो चार्टर्ड उडानको भाडा घटाइसकेको छ। हिमालय एयरलाइन्सले पनि घटाउने घोषणा गरेको छ। यसबाट नेपाल आउने वस्तुको मूल्य केही सस्तो हुने पौडेलको भनाइ छ।
हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि हुने अर्को बेफाइदाको बारेमा नेपाल आयल निगमले संकेत गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनबाट महिनामा करिब ३ करोड नफा हुँदै आएको थियो। निगमले यो नाफाबाट खाना पकाउने ग्यासमा हुने नोक्सानी बेहोर्दै आएको बताएको छ। अब हवाई इन्धनको मूल्य घटेपछि नाफा घटेको र खाना पकाउने ग्यासको नोक्सानीले निगमको वित्तीय अवस्थामा प्रभाव पार्ने बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २५, २०७८, १६:५५:००